SIDEE LOO KALA SAARAA DIRXIGA EE BARKIN IYO MID LAMID AH? - BEER CAGAARAN
Dareeraha ubaxa: wax kasta oo aad u baahan tahay si loo yaqaan beerta. Sawir iyo sharaxaadda hababka halganka
Badanaa, sida cayayaan sida curyaanka, waxay keenaysaa dhibaatooyin badan, sidaas darteed ka takhalus cayayaanka iyo dirxiga mar walba waa muhiim.
Medvedka waxay keentaa qaab nololeedka dhulka hoostiisa, sidaa daraadeed marxaladaha beerta xitaa isla markiiba ma fahmi karaan waxa sababa dhirta ay u dhimanayaan si lama filaan ah.
U dixir ukumaha
Ka dib marka la sameynaayo habka laysku daro, haweeneyda cayayaanka waxay dhistaa buul, taas oo ah godad wareegsan oo ku saabsan 10 sentimitir dheer.
Buulkani wuxuu ku yaallaa qoto dheer 10-15 cm, waxaa ku jira in ay ka baxdo ukunta, tiradaas oo gaari kara 500 gogo '. Sidaas darteed ukumaha aan la daboolin caaryada, curyaamku wuxuu u soo noqdaa waqti ka waqti oo si taxadar leh u baaro.
Ukuntu waa kubadaha dhaadheer oo u eg sida miraha yar yar. Midabka ukunta wuxuu ku kala duwanaan karaa beige ilaa jaalle-bunni leh taabasho yar. Qaadidda ukumaha waxay u egyihiin sidii qoryaha, kaliya ukumaha qudhooda waxay ku yar yihiin cabbirka.
Maadaama ay ukumuhu u baahan yihiin diirimaad, caajisku waxay ku qodayaan qoto dheer, sidaas darteed uma baahnid inaad qoto dheer si aad u hesho. Badanaa waxaa laga helaa burooyinka dusha sare ee dhulka. Dirxiga waxaa ka soo baxa ukunta ka dib 2-3 asbuuc.
Sawirkan waxaad ku arki kartaa sida ukumaha dhirta dhirta:
Dareeraha ubaxa awood u leh in ay xasuusato qulqulka ama lix lugood oo caarad ah oo leh jimicsi ballaaran. Cabbirkoodu wuxuu gaari karaa 15 mm. Caleemaha ubaxa waxay u egtahay dibedda, ubaxa wuxuu la shaqeeyaa iyaga, rakibana dhulka horay.
Aragtida waxay u egtahay cayayaanka qaangaarka ah, iyada oo farqiga u dhexeeya ay ka weyn tahay qiyaasta. Inta lagu jiro horumarka firfircoon, miraha cayayaanka molts molts shan jeer, ka dib taas oo ku bislaada iyo wuxuu noqonayaa mid diyaar u ah dhalmo dheeraad ah.
Dirxiga ma awoodo inuu si buuxda u horumariyo xagaaga, si ay u sii socdaan jiilaalka. Iyaga oo ay la socdaan, qayb ka mid ah cayayaanka horey u jirey cayayaanka.
Medvedka ma aha mid u adkaysata xaaladaha qaboobaha, sidaas daraadeed xaaladaha daran, cayayaanka qaarkood ayaa dhiman kara. Laga soo bilaabo taas inta le'eg ee dufanku ka soo baxo cayayaanka, waxay ku xirnaan doontaa nolosheeda inta lagu jiro xilliga qaboobaha, iyo sidoo kale xakamaynta xiga.
Sawirkaan waxaad arki kartaa sida luuqka Medvedka uu u eg yahay:
Farqiga u dhexeeya dirxiga ubaxa ka soo duulaya May
Xajka ee cayayaanka noocan oo kale ah, sida caarada, waxay u egtahay midab cad, baaxadiisu waxay gaadho 2 cm, dhumucuna waxay noqon kartaa ilaa 8 mm. Afku wuxuu ku yaalaa dhinaca hore ee dhogorta. iyo saddex lammaan oo lugaha yar yar leh oo daboolaya timaha.
On dhinacyada dirxiga ee cayayaanka noocan oo kale ah waxaad arki kartaa dhibco brown, iyo qaybta dambe ayaa yar yahay midab madow ka badan inta kale ee dirxiga.
Xajka ee xayawaanku wuxuu gebi ahaanba ka duwan yahay dirxiga ee duqsigu May. Marka ay timaaddo, ubaxa waxay u egtahay cayayaanka yaryar, oo walxo kasta oo ka mid ah waxa ay noqotaa mid weyn oo qiyaasta ah waxana uu helaa qaab muuqaal ah, oo sii kordhaya sida xayawaanka qaangaarka ah.
Sawirkaan, waxaad arki kartaa sida lamid ah ee duqsiyo bisha May waxay u egtahay:
Haddii aadan isla markiiba bilaabin inaad la dagaalanto Medvedka, ka dibna cayayaanka yar yar iyo kuwa qaangaarka ah ayaa ku sii jiri doona dhammaan xilliyada soo socda. Cayayaanka noocan ah awood u leh inay si sahlan u qodaan dhaqdhaqaaqa dhulkaSidaa darteed, Medvedka ayaa dalooli kara dalool, isaga oo aan loo eegin xaaladaha cimilada.
Waa lagama maarmaan in loola dagaallamo cayayaanka iyo cayayaanka sida ugu dhakhsaha badan, maxaa yeelay labadaba dadka waawayn iyo dirxiga ee cayayaanka ayaa caan u ah cirridkooda aadka u sarreeya, taas oo macnaheedu yahay inay dhaawici karaan nidaamka asaasiga ah ee dhir badan oo dhir ah muddo gaaban.
Hadda waxaa jira habab badan oo wax ku ool ahcaawinta in laga takhaluso cayayaan sida. Midka koowaad waa agrotechnical. Waxay ku jirtaa xaqiiqda ah in ay lagama maarmaan tahay in la diyaariyo ciidda loogu talagalay beeritaanka hore.
Guga hore iyo dayrta goor dambe, dhulku wuxuu u baahan yahay in la qodo oo qodo. Sidaa awgeed, ukumaha ukumaha ee dhirta, dirxiga waa la burburin doonaa, iyo marinnada dhulka hoostiisa ayaa la dhibi doonaa.
Goobidda geedaha beerta wareega wareega sida marigolds, awood u leh inay si joogto ah uga takhalusaan kabaha iyo dirxiga. Xaqiiqdu waxay tahay in urta dhirta ay ka careysiiso cayayaanka dhulka hoostiisa.
Hab kale oo si nabadgelyo leh u ah in laga takhaluso beertu waa in la cuno cayayaanka saliidda cuntada. Daloolka bidix ee bidix, laba dhibcood oo saliid ah ayaa lagu shubayka dib markii ay ku jirto galaas biyo ah. Dhowr daqiiqo, Medvedka ayaa ka muuqan doona dusha sare ee ciidda, daqiiqado yar oo dheerana way dhiman doontaa.
Waa suurtagal in la dagaallamo cayayaanku iyadoo la isticmaalayo sunta cayayaanka casriga ah. Noocyada granules soo jiidata cayayaanka, ka dib markii ay cunaan qadhaadh ay ka tageen iyo, soo baxaan, waxay isla markiiba u dhintaan. Markaad isticmaasho habkan, waxaa aad u muhiim ah in la ururiyo dhammaan sumadaha sumaysan, tan iyo Shimbiraha ayaa sidoo kale lagu sumoobi karaa cayayaankaas.
Medvedka - cayayaanka waxyeello leh oo khatar ku ah dalagga, awood u leh dhalashada degdeg ah. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in loola dagaallamo labada dhagaxa, iyo dirxiga iyo ukunta. Way adagtahay in la dagaallamo cayayaanku, laakiin waxaa habboon in la qaato wakhti si loo baabi'iyo cayayaanka, sidaa darteed, keydso inta badan dalagga.